ဆိုးလ်ရှားလက်ထက် အကြိုဗိုလ်လုပွဲ ကြမ္မာဆိုး ကနေ ရုန်းမထွက်နိုင်သေးတဲ့ ယူနိုက်တက် – Myan Sports
ဆိုးလ်ရှားလက်ထက် အကြိုဗိုလ်လုပွဲ ကြမ္မာဆိုး ကနေ ရုန်းမထွက်နိုင်သေးတဲ့ ယူနိုက်တက်
ကာရာဘောင်းဖလား အကြိုဗိုလ်လုပွဲ ဒုတိယပွဲစဉ်အဖြစ် ဒီမနက်ပိုင်းက မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် နဲ့ မန်စီးတီး အသင်းတို့ ကစားခဲ့ရာ မန်စီးတီး အသင်းက (၂)ဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရပြီး ဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် အသင်းကတော့ ဗီလာ နဲ့ ပွဲကို အနိုင်ရတဲ့ လူစာရင်းက ဂိုးသမား ဒိန်းဟန်ဒါဆန်နဲ့ လင်ဒီလောဖ့် တို့ ဝင်ရောက်တာကလွဲပြီး လူစာရင်းအပြည့်နဲ့ ပွဲထွက်ခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီး အသင်းကလည်း ချယ်လ်ဆီး ကို အနိုင်ရတဲ့ လူစာရင်းကို မာရတ်စ်၊ ဖာနန်ဒင်ဟို တို့ ပါဝင်တာကလွဲပြီး သူတို့ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ လူစာရင်းနဲ့ ပွဲထွက်ခဲ့ပါတယ်။ပွဲအစပိုင်းမှာ (၂)သင်းလုံး ဂိုးရခဲ့ပေမယ့် လူကျွံခဲ့တာကြောင့် နစ်နာခဲ့ရပါတယ်။ပထမပိုင်းမှာတော့ (၂)သင်းလုံးဟာ အခွင့်အရေးတွေရခဲ့ပေမယ့် အသုံးမချနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဂိုးမရှိသရေနဲ့ ပထမပိုင်းကို ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။
MANCHESTER, ENGLAND – JANUARY 06: John Stones of Manchester City celebrates after scoring their team’s first goal during the Carabao Cup Semi Final match between Manchester United and Manchester City at Old Trafford on January 06, 2021 in Manchester, England. The match will be played without fans, behind closed doors asaCovid-19 precaution. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
ဒုတိယပိုင်းမှာ မန်စီးတီး အသင်းက ပိုမိုဖိအားပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ပွဲချိန်မိနစ်(၅၀) မှာ ထောင့်ကန်ဘောကနေ ဂျွန်စတုန်းစ် က မန်စီးတီး အတွက် အပိုင်အဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဦးဆောင်ဂိုး စတင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ ယူနိုက်တက် အသင်းက ချေပဂိုးတွေရဖို့ ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့် အသုံးမချနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ချေပဂိုးမရခဲ့ပဲ မန်စီးတီး အသင်းကို နောက်ထပ်ဦးဆောင်ဂိုးပေးလိုက်ရပါတယ်။ဒီဂိုးကို ဖာနန်ဒင်ဟို က ပွဲချိန်(၈၃)မှာ ဧရိယာအပြင်ကနေ ကန်သွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပွဲအပြီးမှာ မန်စီးတီး အသင်းက (၂)ဂိုး-ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင်ရပြီး လက်ရှိချန်ပီယံဘွဲ့ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းဖို့ ဗိုလ်လုပွဲကို တက်ရောက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီး အသင်းဟာ ဗိုလ်လုပွဲအဖြစ် ဘရန်ဖိုဒ့် ကို အနိုင်ရခဲ့တဲ့ စပါး အသင်းနဲ့ ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကာရာေဘာင္းဖလား အႀကိဳဗိုလ္လုပြဲ ဒုတိယပြဲစဥ္အျဖစ္ ဒီမနက္ပိုင္းက မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ နဲ႔ မန္စီးတီး အသင္းတို႔ ကစားခဲ့ရာ မန္စီးတီး အသင္းက (၂)ဂိုး-ဂိုးမရွိနဲ႔ အနိုင္ရၿပီး ဗိုလ္လုပြဲကို တက္ေရာက္သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။
မန္ခ်က္စတာယူနိုက္တက္ အသင္းကေတာ့ ဗီလာ နဲ႔ ပြဲကို အနိုင္ရတဲ့ လူစာရင္းက ဂိုးသမား ဒိန္းဟန္ဒါဆန္နဲ႔ လင္ဒီေလာဖ့္ တို႔ ဝင္ေရာက္တာကလြဲၿပီး လူစာရင္းအျပည့္နဲ႔ ပြဲထြက္ခဲ့ပါတယ္။မန္စီးတီး အသင္းကလည္း ခ်ယ္လ္ဆီး ကို အနိုင္ရတဲ့ လူစာရင္းကို မာရတ္စ္၊ ဖာနန္ဒင္ဟို တို႔ ပါဝင္တာကလြဲၿပီး သူတို႔ရဲ့ေကာင္းမြန္တဲ့ လူစာရင္းနဲ႔ ပြဲထြက္ခဲ့ပါတယ္။ပြဲအစပိုင္းမွာ (၂)သင္းလုံး ဂိုးရခဲ့ေပမယ့္ လူကၽြံခဲ့တာေၾကာင့္ နစ္နာခဲ့ရပါတယ္။ပထမပိုင္းမွာေတာ့ (၂)သင္းလုံးဟာ အခြင့္အေရးေတြရခဲ့ေပမယ့္ အသုံးမခ်နိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဂိုးမရွိသေရနဲ႔ ပထမပိုင္းကို ၿပီးဆုံးခဲ့ပါတယ္။
ဒုတိယပိုင္းမွာ မန္စီးတီး အသင္းက ပိုမိုဖိအားေပးနိုင္ခဲ့ၿပီး ပြဲခ်ိန္မိနစ္(၅၀) မွာ ေထာင့္ကန္ေဘာကေန ဂၽြန္စတုန္းစ္ က မန္စီးတီး အတြက္ အပိုင္အဆုံးသတ္နိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ဦးေဆာင္ဂိုး စတင္ရရွိခဲ့ပါတယ္။အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ယူနိုက္တက္ အသင္းက ေခ်ပဂိုးေတြရဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ အသုံးမခ်နိုင္ခဲ့တာေၾကာင့္ ေခ်ပဂိုးမရခဲ့ပဲ မန္စီးတီး အသင္းကို ေနာက္ထပ္ဦးေဆာင္ဂိုးေပးလိုက္ရပါတယ္။ဒီဂိုးကို ဖာနန္ဒင္ဟို က ပြဲခ်ိန္(၈၃)မွာ ဧရိယာအျပင္ကေန ကန္သြင္းခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
ပြဲအၿပီးမွာ မန္စီးတီး အသင္းက (၂)ဂိုး-ဂိုးမရွိနဲ႔ အနိုင္ရၿပီး လက္ရွိခ်န္ပီယံဘြဲ႕ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းဖို႔ ဗိုလ္လုပြဲကို တက္ေရာက္သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။မန္စီးတီး အသင္းဟာ ဗိုလ္လုပြဲအျဖစ္ ဘရန္ဖိုဒ့္ ကို အနိုင္ရခဲ့တဲ့ စပါး အသင္းနဲ႔ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။
Previous Article ထောင်ကလွတ်မြောက်ပြီး ဘဝသစ်ကို စတင်နိုင်ခဲ့တဲ့ ရော်နယ်ဒင်ဟို
Next Article မက်ဆီရဲ့သွင်းဂိုးကို အကွက်မြင်မြင်နဲ့ ဖန်တီးခဲ့လို့ ချီးကျုးခံနေရတဲ့ ပီဒရီ